Qoraa soomaaliyeed: Dhaxalkii ayeeyo ayaan Mareykanka kaga dheefaa | Hangool News
Qoraa soomaaliyeed: Dhaxalkii ayeeyo ayaan Mareykanka kaga dheefaa
Maryan Cismaan Maxamed oo ah macalimad da’yar waxna ka dhigta dugsiyada waxbarashada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxay qortay buug caruureed lagu magacaabo Ayeeyo’s Golden Rule, oo macnaheedu yahay taladii dahabiga ahayd ee ayeeyo.
Maryan Cismaan ayaa sababaha ku dhaliyay inay qorto buugaan waxay ku sheegtay qisooyin badan oo ku saabsan xaalado kala duwan oo ay kala kulantay qaar ka mid ah carruurta dugsiyada dhigta.
“Marka aan yaraa, waxaan jeclaa in aan akhristo buugaag badan…buugaagta ayaan u jeestay,qolka ayaan isku xiri jiray, buugaag badan ayaan akhrin jiray..waxaan jeclaa in aan qoro buugaag ka shekeynayo nolosha ay soo mareen carruurta” ayay tiri Maryan oo BBC la hadleysay.
Buugan waxay ku xustay dhacdo qabsatay gabar yar oo soomaali ah oo markii ay Mareykanka tegtay ay carruurta kale ay Iskuulka wax iskala baranayeen ay dhibaato kala kulantay, sidaas, darteed ay dooneyso inay ka hortagto dhibaatooyinka noocaasi ah.
Maryan waxay sheegtay in carruurta ay ka faa’ideysanayaan buuggan inay is qaddariyaan isla markaasna caqabadaha lasoo darso ay u dulqaataan.
“Gabadhii la dhibaateeyay waxay muujisay ixtiraam iyo naxariis, markii dambe, carruurta wa ay isbaddaleen markii ay arkeen in gabadha ay tahay miskiin” ayay tiri Maryan Cismaan.
Buugga Ayeeyo’s Golden Rule waxaa akhriyay oo u riyaaqay carruurta iyo dadka ajaanibta ah isla markaasna laga codsaday Maryan in talooyin ay siiso carruurta wax ka dhigta halkaasi.
Maadama Buugan uu ka shekeynayo nolosha gabdhaha da’da yar ee ku nool gobolkaasi, Maryan waxay sheegtay in hadda ay soo waddo soo saarista buug kale oo ka hadlayo dhibaatooyinka ay la kulmaan wiilasha yar yar ee wax ka barta Mareykanka si ay uga jawaabto cabashada ah in buuggii hore uu ka hadlayay gabdhaha oo kaliya ah.